Beta Version အနေနဲ့မဟုတ်တော့ပဲ Play Store မှာ Download ရယူနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ Microsoft Edge Browser
30 Nov 2017 . 4:45 PM
Android မှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Web Browser တွေမျိုးစုံရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးအများဆုံး Browser တွေကိုပြောပါဆိုရင် Google Chrome နဲ့ Opera Browser တွေပဲရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလတုန်းက Microsoft ကနေ Edge Browser ကို Android အတွက်ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ Preview အနေနဲ့ပဲ Beta Version ကို အသုံးပြုလို့ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက Microsoft Edge Browser ကို အသုံးပြုဖို့အတွက် Windows 10 Insider ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်သလို Register ပြုလုပ်ထားဖို့ပါ လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ Google Play Store မှာပဲ Stable Version ကို အလွယ်တကူ Download ရယူနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
Microsoft Edge Browser ဟာဆိုရင် Interface ရိုးရှင်းပြီး အမြန်နှုန်းကလည်း Google Chrome ထက်တောင် မြန်ဆန်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါသေးတယ်။
Microsoft Edge Browser မှာ အမြန်နှုန်းအပြင် နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ကွန်ပျူတာမှာ Windows 10 Fall Creator Update ကို အသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင် ဖုန်းက Edge Browser မှာ ကြည့်ရှုနေတဲ့ Website ကို ချက်ခြင်း ကွန်ပျူတာကို ပေးပို့နိုင်တဲ့ Continue On PC Feature ပါဝင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချက်က ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာကြား အင်တာနက်သုံးတဲ့နေရာမှာ သိသိသာသာမြန်ဆန်စေမှာပါ။
တကယ်လို့ Microsoft Edge Browser ကို အသုံးမပြုကြည့်ရသေးရင် အခုပဲ ဒီ Link မှာ Download လုပ်လို့ရပါတယ်။
Android မှာ အသုံးပွုနိုငျတဲ့ Web Browser တှမြေိုးစုံရှိနတောဖွဈပါတယျ။ အသုံးအမြားဆုံး Browser တှကေိုပွောပါဆိုရငျ Google Chrome နဲ့ Opera Browser တှပေဲရှိမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပွီးခဲ့တဲ့ အောကျတိုဘာလတုနျးက Microsoft ကနေ Edge Browser ကို Android အတှကျထုတျပေးခဲ့ပွီး အဲ့ဒီအခြိနျတုနျးကတော့ Preview အနနေဲ့ပဲ Beta Version ကို အသုံးပွုလို့ရခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အဲ့ဒီအခြိနျတုနျးက Microsoft Edge Browser ကို အသုံးပွုဖို့အတှကျ Windows 10 Insider ဖွဈနဖေို့လိုအပျသလို Register ပွုလုပျထားဖို့ပါ လိုအပျတာဖွဈပါတယျ။ အခုအခြိနျမှာတော့ Google Play Store မှာပဲ Stable Version ကို အလှယျတကူ Download ရယူနိုငျနပွေီဖွဈပါတယျ။
Microsoft Edge Browser ဟာဆိုရငျ Interface ရိုးရှငျးပွီး အမွနျနှုနျးကလညျး Google Chrome ထကျတောငျ မွနျဆနျတယျလို့ ပွောလို့ရပါသေးတယျ။
Microsoft Edge Browser မှာ အမွနျနှုနျးအပွငျ နောကျထပျအားသာခကျြတဈခုရှိပါသေးတယျ။ အဲ့ဒါကတော့ ကှနျပြူတာမှာ Windows 10 Fall Creator Update ကို အသုံးပွုနတေယျဆိုရငျ ဖုနျးက Edge Browser မှာ ကွညျ့ရှုနတေဲ့ Website ကို ခကျြခွငျး ကှနျပြူတာကို ပေးပို့နိုငျတဲ့ Continue On PC Feature ပါဝငျလာတာပဲဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအခကျြက ဖုနျးနဲ့ကှနျပြူတာကွား အငျတာနကျသုံးတဲ့နရောမှာ သိသိသာသာမွနျဆနျစမှောပါ။
တကယျလို့ Microsoft Edge Browser ကို အသုံးမပွုကွညျ့ရသေးရငျ အခုပဲ ဒီ Link မှာ Download လုပျလို့ရပါတယျ။
by phonehayko . 17 hours ago
by Min Than Htike . 21 hours ago